MiniX TV Igbe: Gosi gam akporo (ma ọ bụ Linux) na TV gị | Site na Linux
MiniX TV Igbe: Gosi gam akporo (ma ọ bụ Linux) na TV gị
Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | GNU / Linux, Noticias
Site FanlessTech Agụrụ m banyere arịa a dị egwu.
Abịa na android 4.0 ndabara, na-enye ohere ijikọ na TV, gosi na nke a (na igwe onyonyo) na ngwa ị na-agba na gị gam akporo (onye wetara ndi otu). Agbanyeghị, ịnwekwara ike ịwụnye ọtụtụ Linux distros. Ndị ọ na-akwado nke ọma karị bụ:
Agbanyeghị, inwe chipset / CPU Onye mmeri A10, enwere ike itinye ọtụtụ distros (Ebe ọ bụ na otu chipset a nwere MK802 Mini PC na ọtụtụ ọrụ distros na mgbakwunye na ndị a), Ọ bụ ihe na-arịọ mbụ na ukara support forums:
MiniX TV Igbe. Nzukọ Nkwado
Gwọ nke akụrụngwa a bụ $ 99, mana ha na-enye akwụkwọ ikike afọ 1 ... ma n'ụzọ doro anya, obodo na-arụsi ọrụ ike 😀
O nwere 512MB nke RAM, 4GB nke nchekwa di n'ime, na mgbakwunye inwe oghere iji gbasaa ebe nchekwa na microSD, ọdụ ụgbọ USB 2, 802.11n Wifi, yana ọdụ ụgbọ mmiri HDMI.
Ọnọdụ okpomọkụ nke akụrụngwa ga-adị n'etiti 5 Celsius na kachasị 35 Celsius, ọ nwere nkwado dị ukwuu nke onyonyo, ndepụta okwu na usoro vidiyo nke ọ na-arụ ọrụ.
Nwere ike ịhụ nkọwa niile na saịtị gọọmentị:
MiniX TV Igbe. Nka na ụzụ nkọwa
M hapụụrụ gị ụfọdụ foto 😀
N'ikwu eziokwu, enwere m mmasị n'echiche nke ịnwe ngwaọrụ a ... ya bụ, inwe ngwaọrụ m nwere ike ijikọ na TV, ngwaọrụ nke na-arụ ọrụ na Linux (ma ọ bụ gam akporo, nke fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu), echere m na ọ dị mma 😀
Ọtụtụ ekele nwekwara Ịkwalite maka post ha mere, nke ọma ewepụtara m foto abụọ n'ebe ahụ 🙂
Ka o sina dị, enwere m olileanya na ị hụrụ ya n'anya.
O doro anya na Linux na-penetrating ọhụrụ na ahịa kwa ụbọchị, otu ndị ọzọ na-egosi na ya nwere 😉
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » GNU / Linux » MiniX TV Igbe: Gosi gam akporo (ma ọ bụ Linux) na TV gị
Ihe 18 kwuru, hapụ nke gị
Daniel Rojas kwuru dijo
Ọ ga-agafe omenala ndị Argentina? Ọ dị ezigbo mma
Zaghachi Daniel Rojas
Mba mba, Moreno egbochila ha. Kretina achọghị ka ya na "ụlọ ọrụ mba."
Zaghachi to VisitntX
Kedu ihe dị njọ, enweghị m ike ịchekwa dollar, enweghị m ike ịzụta ezigbo akụrụngwa siri ike n'ihi na ọnụahịa na-agba, nke ọma, ihe a niile bụ ọdachi ...
Enwere m obi ekele na ha ka na-eji gam akporo eme ekwentị adịghị mma. N'oge na-adịghị ma eleghị anya ọbụnadị nke ahụ.
Wa na-echegbu onwe banyere mgbochi nke UEFI, anyị enweghị nchekasị ndị ahụ, anyị na-echegbu onwe gị banyere nke ọ ga - eme ngwa ngwa na PC ochie ndị fọdụrụ na Argentina.
(Che, ọ na-eji ọchị, eh).
Otu ihe a na - eme ebe a na Cuba, gburugburu dịka Gnome2, Xfce, LXDE yana OpenBox na FluxBox bụ ndị ama ama, ọkachasị n'ihi na ngwaike nkịtị bụ ezigbo ogbenye ...
Zaghachi KZKG ^ Gaara
«Kretina»… HAHAHAHAHAHA !!!!!
Shhhhh ... na GEO na HALCON zitere m ka m gbuo m ...
O di nwute, ka m na aru oru na guild, enwere m ike inweta ihe kariri ma obu obere. Ugbu a KDE na-efe.
EHH onye ara ara, kedu ka isi ekwu okwu banyere onye isi oche?
Nwanyị Kretina, nke kachasị mma! xDD
Dị ka ị na-ekwu, na-ekele ịdị mma na anyị nwere ụlọ ọrụ mba ... nke akwụkwọ mmado, iji kụọ akụrụngwa eletrọniki niile nke ndị enyi kretina si Tierra del Fuego batara mba ahụ na akụkọ ifo "Argentine Industry".
Gịnị a manga omekome ...
You nughi? Ugbu a, ndị Ciccone ga - eme ndị a, ndị ga - eme tiketi. [egwuregwu, egwuregwu, seeeeee]
Ekele diri Nwaanyị Kretina, mbuli elu ya, ọ bụ naanị otu ihe enwere akwụkwọ ndetu Commodore, Bangho, Ken Brown, EXO, NCX? na ọnụahịa akụ na ụba, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ezigbo akwụkwọ ndetu ga-efu n'èzí ...
Mana hey, ọbụlagodi na anyị nwere ike ịlele youtube, maka ugbu a. Anyị chefuru maka Mintbox, Minix TV, Ubuntu ekwentị na Ubuntu TV.
Facundo Alvarez ebe ihe oyiyi dijo
Kwụsị Amaokwu, Enwetara m otu ... ka ha si achọ ikwu okwu maka ee
Zaghachi na Facundo Alvarez
2 ọnwa gara aga azụrụ m ihe dị oke ọnụ karịa nke ahụ, yabụ, ọ bụrụ na ọ mee!
Otu n'ime ha ga-amasị m, yana swiiti owu na ube pi ... mana m ga na-arọ nrọ
Nnukwu Versionitis dijo
Zoputa onwe gi Mint Box !!, lee na ị nwere ezigbo asọmpi ..
Ha enweghịzị ihe ngọpụ iji ree ya na 550 U $ .. !!
(Ndo maka njikọ ahụ) ọ bụ naanị igosi etu o si dị oke ọnụ, ọ bụ ezie na ọ na-anwa anwa .. hehe .. mana maka ọnụahịa ahụ ebe a na Ciudad del Este M zụtalarị igwe dị mma (ọkacha mma na-enweghị UEFI, hehe)
Nzaghachi na Nnukwu Versionitis
Okonkwo. 1 dijo
Akụrụngwa dị ka nke ahụ dị mfe, gịnị ga - abụ uru dị ukwuu na mgbakwunye na ịwụnye GNU / Linux?
Echere m na Ubuntu gam akporo na-adọrọ uche m.
Zaghachi na Lex
Adoniz chukwu (@ oluchukwu1) dijo
Ọ dị mma, maka dollar 99 maka obere na ha nyere gị ya, ebe a na Guatemala, ha na-ere igwe na obere akụrụngwa maka 1000 quetzales 142 dollars karịa ma ọ bụ obere.
Ma ọ dịkarịa ala ọ dị m ka na mgbakwunye na ịwụnye gnu / Linux distro ọ bụ ọnụ ahịa akụ na ụba.
Ebee ka ị hụla otu dị ka ihe na-erughị 100 dollar?
Zaghachi Adoniz (@ NinjaUrbano1)
Adoniz, Adịghị m ekwu na ị ga-adị ọnụ ala ... M jụrụ gịnị ga-abụ isi uru ma e wezụga ịwụnye GNU / Linux? ịnyagharịa na Internetntanetị?
99USD !!! Mana ọ bụrụ na ha dị ọnụ ala karịa ma bụrụkwa ihe izizi ZERO Devices (ndị mepụtara ihe a) na AsiaPads: http://www.asiapads.com/index.php?cPath=190
Zụta site na PayPal na oge, gafere site na omenala dị ka ihe niile (na-akwụ 50% nke uru ha na-ekwupụtara gị, nke ga-adị ala karịa ezigbo ya ...). Mbupu akwụkwọ ozi (site na mail) na-emefu ọtụtụ ọbụlagodi na-akwụghị ụgwọ ọ bụla.
jorgito iguazu dijo
Ndewo ndị mmadụ nọ n'ebe ọwụwa anyanwụ obodo paraguay igbe tv bụ dollar 50, a na-ewere dollar na $ 10,50 n'ihi ya, ọ ga-abụ ihe dịka $ 500 na omenala ọ dị mfe ịgafe. were ya n’igbe ahụ were ya n’aka gị,
Zaghachi jorgito iguazu
LDD: ube Linux flavored na Mac OS X
Plank: n'ọdụ ụgbọ mmiri ultra-light